JINGHPAW KASA: နမ့်ဆန်ယန်တံတားတွက် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၁၈) နယ်မြေဖြစ်သော မြစ်ကြီးနား - လိုင်ဇာလမ်း နမ့်ဆန်ယန်ကျေးရွား တံတားတွင် ကေအိုင်အေ ပြည်သူ့စစ် မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ကြား အောက်တိုဘာ (၁၇) ရက် မနက် (၉း၀၀) နာရီခန့်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်များက ဒွမ်ဘန်ဘွမ် စခန့်းမှနေပြီး (၈၁ မမ) နက်လက်ကြီးများဖြင့် နမ့်ဆန်ယန်ရွာအတွင်း ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤတိုက်ပွဲတွင် ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ တစ်ဦး သေဆုံးကြောင်းလည်း ဆက်လက်သတင်း ရရှိပါသည်။
(1) Burmese soldier killed in Nam San Yang bridge, it is between Myitkyina – Laiza road, which is under KIA (18) battalion region, KIA (5th) brigade area, on 17th October. There wasabattle at the Nam San Yan bridge, at 09:00 AM on that day. Moreover, the Burmese troop, who is based on Dum Bang village, fired with 81MM artillery weapon to the Nam San Yang.